Olee otú Tinye Lyrics Gị iTunes Music na ogbe
> Resource> iTunes> Olee otú iji Tinye Lyrics ka iTunes Library na ogbe
Ọ ga-abụ oké ma ọ bụrụ na ị nwere ike na-ele lyrics mgbe na-ege ntị songs. Na mgbe ị na ịkpọọ egwu na iTunes, na lyrics pụrụ iyi ma na-adịghị a akụkụ nke song onwe ya, otú ị nwere ike ghara nyefee lyrics gị obere ngwaọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere na-egwu songs otu otu na-lyrics nke ọ bụla song on iTunes. Ọ bụ n'ezie a n'efu nke oge na ume. Wondershare TidyMyMusic maka Mac Otú ọ dị, nwere ike mfe a mgbu site na-agbakwụnye lyrics gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na ogbe. Na dị nnọọ ọtụtụ clicks, ị nwere ike nweta lyrics na embed ha ka ha songs na-na ọ laa. Ke adianade do, ọ na-okụt ọzọ ozi dị ka track nkọwa, album nkà na ndị ọzọ. Ka n'iyi dịghị oge na ego otú iji ya n'okpuru.
1 Tinye iTunes n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
N'ihi na iTunes Ọbá akwụkwọ, unu adịghị mkpa mbubata ka usoro ihe omume site onwe gị. Mgbe ihe omume ahụ ga-emepe oge ọ bụla, ọ ga-ike iṅomi dum iTunes Ọbá akwụkwọ na mbubata music na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes.
2 Chọta lyrics nile iTunes music
Iji nweta lyrics na ogbe, dị nnọọ ahụ iṅomi bọtịnụ na nkụnye eji isi mee. Tinye akà rà checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite chọta lyrics nile iTunes music na ozi ndị ọzọ nwekwara ike chọpụtara n'oge usoro.
Cheta na: Nke a na usoro pụkwara inyere gị aka wepụ iTunes duplicates. Dị nnọọ tinye akara checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịkpali duplicated songs ka ahịhịa.
3 Tinye lyrics dum iTunes n'ọbá akwụkwọ
Mgbe lyrics na-chọpụtara, i kwesịrị embed ha ka ha ọ bụla song ka na-n'ebe ọ bụla. Họrọ otu song na ị pụrụ ịhụ a zuru ndepụta nke ọmụma na nri n'igbe. Jide n'aka na ọmụma bụ ihe ị chọrọ na pịa Mee bọtịnụ na ala n'aka nri. I nwekwara ike họrọ ọtụtụ iTunes songs itinye n'otu oge.
Site n'ịgbaso n'elu nzọụkwụ, na lyrics na-agbakwunyere na iTunes music na mgbe ị na-agafeta songs gị obere ngwaọrụ dị ka iPad, ị ka nwere ike na-ele lyrics. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie ozi site onwe gị, ị nwere ike pịa Dezie icon na nri n'igbe ma jupụta na edezi ubi. Chọrọ nwere a na-agbalị ugbu a? Dị nnọọ na-aga n'ihu ibudata a usoro na-enwe a ohuru music ahụmahụ site ugbu a.
Olee otú mmekọrịta iPad na iTunes na atụfu ihe ọ bụla
Top 5 iTunes Wijetị si Yahoo